INDLELA YOKUBHALA NGESINGISI KU-BLUESTACKS - I-BLUESTACKS - 2019
Ungashintsha kanjani isakhiwo sekhibhodi ku-BlueStacks emulator
Sonke sijwayele ukuthatha isithombe esimisweni, amadokhumenti, amakhasi ezincwadi nokunye okuningi, kodwa ngezizathu eziningana zokukhipha "umbhalo" kusuka esithombeni noma esithombeni, okwenza kulungiswe, kusadingeka.
Ngokuvamile izingane zesikole nabafundi babhekana nesidingo sokuguqula izithombe zibe umbhalo. Lokhu kuyimvelo, ngoba akekho ozobhala kabusha noma othayipha umbhalo, azi ukuthi kunezindlela ezilula. Kungaba okuqondile uma kungenzeka ukuba uguqule isithombe sibe umbhalo eMicrosoft Word, kuphela lolu hlelo alukwazi ukuqaphela umbhalo noma ukuguqula amafayili okudweba emadokhumenti wombhalo.
Indlela kuphela "yokubeka" umbhalo kusuka efayeleni le-JPEG (jpeg) eZwini ukuyiqaphela ohlelweni lwesithathu, bese uyikopisha kusuka lapho bese uyinamathisela noma umane ulithumele kumbhalo wombhalo.
I-ABBYY FineReader kufanele isofthiwe yokuqashelwa yombhalo ethandwa kakhulu. Sizosebenzisa umsebenzi oyinhloko walomkhiqizo ngezinjongo zethu - ukuguqula izithombe zibe umbhalo. Kusukela esihlokweni sewebhu yethu ungafunda kabanzi mayelana namakhono we-Abbie Fine Reader, kanye nokuthi ungalanda kanjani lolu hlelo uma lungakafaki ku-PC yakho.
Ukuqaphela umbhalo nge-ABBYY FineReader
Landa uhlelo, ulifake kukhompyutha yakho bese ugijima. Engeza isithombe efasiteleni, umbhalo ofuna ukuwuqaphela. Ungakwenza lokhu ngokumane uhudula futhi ulahle, noma ungachofoza inkinobho ethi "Vula" esesibhashini bese ukhetha ifayela elifisa ukufisa.
Manje chofoza inkinobho ethi "Yazi" bese ulinda kuze kube yilapho u-Abby Fine Reader ehlola isithombe bese esusa wonke umbhalo kuwo.
Namathisela umbhalo ube idokhumenti futhi uthekelise
Uma i-FineReader ibona umbhalo, ingasetshenziswa futhi ikopishwe. Ukuze ukhethe umbhalo, sebenzisa igundane, ukulikopisha, cindezela "CTRL + C".
Manje vula idokhumenti ye-Microsoft Word bese unamathisela kuso umbhalo okwamanje oqukethwe ebhodini lokunamathisela. Ukuze wenze lokhu, cindezela okhiye "CTRL + V" ekhibhodi yakho.
Isifundo: Ukusebenzisa ama-hotkeys eZwini
Ngaphezu kokumane ukukopisha / ukufaka umbhalo kusuka ohlelweni oluya kwesinye, u-Abbie Fine Reader ikuvumela ukuba uthumele umbhalo owaziwayo kwifayela le-DOCX, okuyinto eyinhloko ye-MS Word. Yini edingekayo ukwenza lokhu? Konke kulula kakhulu:
khetha ifomethi edingekayo (uhlelo) kwimenyu ye-"Londoloza" esekelwe iphaneli yokufinyelela esheshayo;
chofoza kule nto bese ucacisa indawo ongayilondoloza;
Cacisa igama lwedokhumenti elikhishiwe.
Ngemva kokuba umbhalo ufakwe noma uthunyelwe eZwini, ungawuhlela, ushintshe isitayela, ifonti nokufometha. Imininingwane yethu kule ndaba izokusiza ngalokhu.
Qaphela: Idokhumenti elithunyelwe lizoqukatha wonke umbhalo owaziwa yilo hlelo, ngisho nokunye okungase kungadingeki, noma okungaziwa ngokuphelele.
Isifundo: Ukufometha kombhalo ku-MS Word
Isifundo sevidiyo ekuhumusheni umbhalo ukusuka kwesithombe kuya efayeleni le-Word
Guqula umbhalo esithombeni kuDokhumenti ye-Inthanethi
Uma ungafuni ukulanda nokufaka noma yiziphi izinkampani zangaphandle kwikhompyutha yakho, ungakwazi ukuguqula isithombe ngombhalo kumbhalo wombhalo online. Kunezinsizakalo eziningi zewebhu zalokhu, kodwa okuhle kunazo zonke, kubonakala ngathi, i-FineReader Online, esebenzisa amandla we-scanner ye-ABBY efanayo yesofthiwe emsebenzini wayo.
I-ABBY FineReader Online
Landela isixhumanisi ngenhla bese ulandela lezi zinyathelo:
1. Ngena ngemvume kusayithi usebenzisa i-Facebook yakho, i-Google noma iphrofayili ye-Microsoft futhi uqinisekise imininingwane yakho.
Qaphela: Uma kungekho okunye okukhethwa kukho okukufanele, kuzodingeka uhambe ngenqubo egcwele yokubhalisa. Kunoma yikuphi, lokhu akulula kunanoma iyiphi enye indawo.
2. Khetha "Qaphela" kukhasi eliyinhloko bese ulayisha isayithi isithombe ngombhalo ofuna ukukhipha.
3. Khetha ulimi lwedokhumenti.
4. Khetha ifomethi ofuna ukuyilondoloza umbhalo owaziwayo. Esimweni sethu, lokhu kuyi-DOCX, i-Microsoft Word.
5. Chofoza inkinobho ethi "Yazi" bese ulinda kuze kube yilapho insizakalo ihlola ifayela bese iguqula ibe idokhumenti yombhalo.
6. Gcina, ngokuqondile, ukulanda ifayela lombhalo kukhompyutha yakho.
Qaphela: Isevisi ye-ABBY FineReader inthanethi ayikugcini nje ukugcina idokhumenti yombhalo kwikhompyutha yakho, kodwa futhi ukuyithumela kuma-storages namafu nezinye izinsizakalo. Lokhu kufaka phakathi i-BOX, i-Dropbox, i-Microsoft OneDrive, i-Google Drayivu ne-Evernote.
Ngemuva kokuthi ifayela ligcinwe kukhompyutheni yakho, ungavula futhi ulihlele, lihlele.
Yilokho, kusukela kulesi sihloko ufunde ukuhumusha umbhalo eZwini. Naphezu kokuthi lolu hlelo alukwazi ukubhekana nalolu msebenzi obonakala lulula, lungenziwa ngohlelo lwe-third party software - uhlelo lwe-Abby Fine Reader, noma amasevisi akhethekile e-intanethi.
Dala ibhokisi lemeyili le-Rambler imeyili
Yamukela ividiyo esusiwe kumadivayisi we-Android
I-WebCam Monitor 6.2
Ukukhubaza isibuyekezo se-Yandex. Isiphequluli
Isithombe-skrini - isifinyezo esikuvumela ukuthi uthathe okwenzekayo esikrinini. Ithuba elinjalo lingaba usizo ezimweni ezihlukahlukene, isibonelo, ukudweba imiyalo, ukulungisa imphumelelo yemidlalo, ukubonakaliswa okubonakalayo kwephutha elibonisiwe, njll. Kulesi sihloko, sizocubungula ukuthi singathatha kanjani izithombe ze-iPhone. Funda Okwengeziwe
Sishintsha umzila we-D-link DIR-615
Engeza umbhalo ngokuma ku-Microsoft Word
https://termotools.com zu.termotools.com © I-Bluestacks 2019